War Murtiyeed ka soo baxay shir ay dhalinta Maqaabul Ogaadeen ee Qaranka Soomaaliyeed khadka ku yeesheen | BuhodlePost.com
War Murtiyeed ka soo baxay shir ay dhalinta Maqaabul Ogaadeen ee Qaranka Soomaaliyeed khadka ku yeesheen
Aug 1, 2017 - jawaab
Buuhoodle Post—Dhalinta Beesha Maqaabul Ogaadeen ee Qaranka Soomaaliyeed ayaa war murtiyeed ka soo saaray kulan ay khadka internetka ku yeesheen Galabnimadii Isniinta.
Dhalinta Maqaabul ayaa xafiisyo ku leh magaalooyinka kala ah Muqdisho, Kismaayo, Kampala, Sanca iyo Meelo kale.
Dhalinta Maqaabul ayaa si qotodheer uga munaaqashootay arimo badan oo si toos ah iyo si dadban u taabanaya dadka iyo xuduudaha deegaanada Maqaabul oo ay ka mid yihiin arimaha bini’aadaminimo, abaaraha soo noq-noqday ee halis galiyay xoolaha iyo xoola dhaqatada. xaalufinta dhirta,shirkadaha shidaalka qoda, kalluumeysiga sharcidarrada, maraakiibta xaalufinaya kheyraadka badda, is la markaasna sunta ku shubaya badda deegaanka Joorre, gaar ahaan Raas-kambooni, kala firirsanaanshaha iyo kala warqab la’aanta dadweynaha Maqaabul, iwm.
Shirka ayaa lagu doortay Gole Fulin oo danaha dadka Maqaabul Ogaadeen ee qaranka Soomaaliyeed si joogta ah u la soconaya, kaas oo shaqadiisu noqondoonto ka warbixinta, la socodka horumarka shaqooyin, dhaqan-dhaqaale, waxbarasho, siyaasadeed, bulsho, dhaqan iyo dhaqaale, is la markaasna daraasad ka sameyndoona saameynta arimaha bini’aadantinimo ee ku xeeran deegaanada iyo dadka, si xal loogu helo.
Gudiga Fulinta ee Maqaabul Ogaadeen ee qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay xubnaha ka tirsan beesha in ay daacadnimada iyo u shaqeynta iskaa wax u qabso ah la garabtaagnaadaan dadkooda ku dhaqan Qubi, Doh iyo Doollo, Koonfurta Wajeer, Tuulooyinka iyo magaalooyinka W/Barri iyo dhammaan deegaanada Joorre oo ay ka mid yihiin magaalooyinka iyo Tuulooyinka: Badhaadhe, Kulbiyow, Waraq, Bilis Qooqaani, Raas-Kambooni, Kismaayo, qurbaha iyo xeryaha Qaxootiyada, iwm.
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliland oo warsaxaafadeed qabtay
© 2017 BuhodlePost.com - All rights reserved.